အသစ်ထွက် ဇာတ်ကားအသစ်များသိနိုင်ရန် ယခုလင့်ကိုဝင်ပြီး page ကို like & shareလေးလုပ်ပေးကြပါ
Green Rush (2020) 2020
Nobody (2021) 2021
The Cursed: Dead Man’s Prey (2021) 2021
83 (2022) 2021
God of Gamblers II+III 1990
Ishaqzaade (2012) 2012
Bachchhan Paandey (2022) 2022
The Priest (2021) 2021
Firestarter (2022) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ "Firestarter" ဆိုတဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Thrillerကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အန်ဒီနဲ့ ဗစ်ကီတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှချာလီဆိုတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ချာလီဟာသာမန်ကလေးတော့မဟုတ်ပါဘူး သူ့မှာမွေးရာပါထူးခြားတဲ့ အစွမ်းပါလာတဲ့ကလေးမလေးဖြစ်ပါတယ် အန်ဒီနဲ့ဗစ်ကီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာလည်း သူ့သမီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့အစွမ်းကြောင့် ဖြစ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေစမ်းသပ်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့တွေကနေရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတာပေါ့ ဒါပေမယ့်တစ်ရက်ချာလီတစ်ယောက်ကျောင်းမှာမတော်တဆ သူ့အစွမ်းကို ထုတ်သုံးမိတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆုတောင်းမပြည့်တော့ပါဘူး ချာလီရဲ့အစွမ်းတွေကိုစမ်းသပ်ချင်တဲ့ အစိုးရအေးဂျင့်တွေရောက်လာပါတော့တယ် အစွမ်းကိုသေချာမထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့ချာလီတစ်ယောက် သူ့ကိုယ်သူ ကာကွယ်နိုင်ပါ့မလား စွမ်းအားတွေရရှိလာတဲ့အရင်းအမြစ်ကရောဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ "Firestarter" ဆိုတဲ့အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ Thrillerကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ အန္ဒီနဲ႔ ဗစ္ကီတို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္မွခ်ာလီဆိုတဲ့ သမီးေလးတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္ ခ်ာလီဟာသာမန္ကေလးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး သူ႔မွာေမြးရာပါထူးျခားတဲ့ အစြမ္းပါလာတဲ့ကေလးမေလးျဖစ္ပါတယ္ အန္ဒီနဲ႔ဗစ္ကီတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဟာလည္း သူ႔သမီးရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အစြမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္အႏၲရာယ္ေတြစမ္းသပ္ဖို႔အတြက္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကေနေရာက္လာမွာကိုစိုးရိမ္ေနရတာေပါ့ ဒါေပမယ့္တစ္ရက္ခ်ာလီတစ္ေယာက္ေက်ာင္းမွာမေတာ္တဆ သူ႔အစြမ္းကို ထုတ္သုံးမိတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆုေတာင္းမျပည့္ေတာ့ပါဘူး ခ်ာလီရဲ႕အစြမ္းေတြကိုစမ္းသပ္ခ်င္တဲ့ အစိုးရေအးဂ်င့္ေတြေရာက္လာပါေတာ့တယ္ အစြမ္းကိုေသခ်ာမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ခ်ာလီတစ္ေယာက္ သူ႔ကိုယ္သူ ကာကြယ္ႏိုင္ပါ့မလား စြမ္းအားေတြရရွိလာတဲ့အရင္းအျမစ္ကေရာဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ================================================================================== GDtot ...
Koorman (2022) ##unicode ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ စိတ်ဖတ်နိုင်တဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက် ၊ ပုံမှန်လူအတိုင်းမနေဘဲ ခြံထဲကခြံပြင်မထွက် ၁၃နှစ်လောက်နေလာတဲ့ အဲဒီ ရဲအရာရှိရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုကောင်းအောင် ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါနာဆိုတဲ့ အဲဒီရဲအရာရှိက ဘဝကြီးကို ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေပြီး တစ္ဆေလား စိတ်ကူးယဉ်နေတာလား မသိတဲ့ စတယ်လာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကိုလည်း မြင်နေရတာပါ စတယ်လာက သူ့ကို ဆူမှ ထမင်းစားတတ် ၊ အိပ်တတ်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့ဘဝနောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းက ဘာများဖြစ်မလဲ ။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖတ်နိုင်တဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အမှုတွေကို သူများနဲ့မတူဘဲ ဘယ်လိုဖော်ထုတ်သွားမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားမှာ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်လို့ ခံစားကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ စိတ္ဖတ္ႏိုင္တဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ ၊ ပုံမွန္လူအတိုင္းမေနဘဲ ၿခံထဲကၿခံျပင္မထြက္ ၁၃ႏွစ္ေလာက္ေနလာတဲ့ အဲဒီ ရဲအရာရွိရဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈေကာင္းေအာင္ ပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ဒါနာဆိုတဲ့ အဲဒီရဲအရာရွိက ဘဝႀကီးကို ျဖစ္သလိုေနထိုင္ေနၿပီး တေစၦလား စိတ္ကူးယဥ္ေနတာလား မသိတဲ့ စတယ္လာဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးကိုလည္း ျမင္ေနရတာပါ စတယ္လာက သူ႔ကို ဆူမွ ထမင္းစားတတ္ ၊ အိပ္တတ္တဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ...
The Northman (2022) 1.2##unicode ထီးနန်းလုပွဲတွေကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ The Northman အက်ရှင်ကားမှာတော့ The Queen’s Gambitနဲ့ လတ်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသမီး Anya Taylor Joyကို ဒီဇာတ်ကားမှာ မြင်တွေ့ရမှာမို့အားကိုပေးသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါပဲ ဇာတ်အိမ်ကလည်းအတော်ခိုင်ပြီး အမိုက်စားဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ သတ်ခန်းဖြတ်ခန်းတွေကို မြင်ရမှာမို့ ဒီဇာတ်ကားကတော့ 2022ရဲ့ အကောင်းဆုံးကားတစ်ကားထဲမှာ ပါဝင်မယ့်ကားလို့ကိုပြောလို့ရပါတယ် မင်းသားအမ်လက်ရဲ့ ဖခင် ဘုရင်ကြီးကို သူ့ညီ မင်းသားက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီးထီးနန်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ် ညီတော်ရဲ့ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့ အကြံကို ကြိုသိထားတဲ့ဘုရင်ကြီးက သူအသတ်ခံရရင် ကလဲ့စားချေပေးဖို့ သားဖြစ်သူ မင်းသားအမ်လက်ကိုသစ္စာဆိုခိုင်းခဲ့ပါတယ် ဖခင်ဖြစ်သူ လုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက် မင်းသားအမ်လက်က အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းထွက်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ဘဝပန်းတိုင်ကို ကလဲ့စားချေဖို့လို့ကြံရွယ်ထားတဲ့ မင်းသားအမ်လက် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဖခင်အတွက်ဘယ်လိုလက်စားချေမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ထီးနန္းလုပြဲေတြကို အေျခခံ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ The Northman အက္ရွင္ကားမွာေတာ့ The Queen’s Gambitနဲ႔ လတ္တေလာနာမည္ႀကီးေနတဲ့ မင္းသမီး Anya Taylor Joyကို ဒီဇာတ္ကားမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာမို႔အားကိုေပးသင့္တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းပါပဲ ဇာတ္အိမ္ကလည္းအေတာ္ခိုင္ၿပီး အမိုက္စားဇာတ္ဝင္ခန္းေတြ သတ္ခန္းျဖတ္ခန္းေတြကို ျမင္ရမွာမို႔ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ 2022ရဲ႕ ...
IMDB: 7.9/10 6,265 votes
Get the Gringo (2012) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါကြည့်ရှုကြရမယ့်ဇာက်ကားကတော့ "Get The Gringo(2012)"ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။ အမေရိကန်လူမျိုး ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ဟာအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် မက္ကစီကိုအကျဉ်းထောင်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေများရှင်သန်ရပ်တည်သွားမလဲ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်လို့ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့်ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါပဲ။ ဇာတ်ကားထဲမှာတော့..... အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့ သူ့အပေါင်းအပါဟာ လုယက်ပြီးရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုကားထဲထည့်ပြီးမက္ကစီကိုနယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးလာရင်း အဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်။အပေါင်းအပါကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကားကိုမောင်းနှင်လာတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးရာဇဝတ်သားကတော့ ဆိုးဝါးလှတဲ့မက္ကဆီကိုအကျဉ်းထောင်တစ်ခုဆီကို အပို့ခံရတော့တာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ရာဇဝတ်သားတွေနေထိုင်ရာထိုနေရာနဲ့စိမ်းသက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ အန္တရာယ်များကြောင်းသိရှိလာရတယ်။သူဟာ အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်သွားပြီး ထောင်ထဲမှတစ်ချို့အကြောင်းအရာများကိုသိရှိလာရကာ ကောင်လေးဆီမှ အကူအညီတွေလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ သူဟာ သူရဲ့ပစ်မှတ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစဉ်စရာရှိတာများကိုသေချာစီစဉ်ကာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ကယ်တင်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့..... သူဟာ ဘယ်လိုအဟန်အတားတွေကိုကျော်ဖြတ်ရမလဲ၊ ခင်မင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးတို့သားအမိကိုရော ဘယ်လိုတွေများကယ်တင်ပေးမလဲ၊ ပိုက်ဆံတွေကိုရော ပြန်ယူနိုင်သွားမလားဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမှာပါနော်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါၾကည့္ရႈၾကရမယ့္ဇာက္ကားကေတာ့ "Get The Gringo(2012)"ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားေလးပါပဲ။ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ရာဇဝတ္သားတစ္ေယာက္ဟာအဖမ္းခံလိုက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ မကၠစီကိုအက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုကိုေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုေတြမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္သြားမလဲ ဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္လို႔ အႀကိဳက္ေတြ႕ၾကမယ့္ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားပါပဲ။ ဇာတ္ကားထဲမွာေတာ့..... အေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္နဲ႔ သူ႔အေပါင္းအပါဟာ လုယက္ၿပီးရလာတဲ့ပိုက္ဆံေတြကိုကားထဲထည့္ၿပီးမကၠစီကိုနယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးလာရင္း အဖမ္းခံလိုက္ရပါေတာ့တယ္။အေပါင္းအပါကေတာ့ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ကားကိုေမာင္းႏွင္လာတဲ့အေမရိကန္လူမ်ိဳးရာဇဝတ္သားကေတာ့ ဆိုးဝါးလွတဲ့မကၠဆီကိုအက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုဆီကို အပို႔ခံရေတာ့တာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ သူဟာ ရာဇဝတ္သားေတြေနထိုင္ရာထိုေနရာနဲ႔စိမ္းသက္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္းသိရွိလာရတယ္။သူဟာ အဲ့ဒီေနရာမွာပဲ ဆယ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ခင္မင္သြားၿပီး ေထာင္ထဲမွတစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသိရွိလာရကာ ေကာင္ေလးဆီမွ အကူအညီေတြလည္းရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ သူဟာ သူရဲ႕ပစ္မွတ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးစီစဥ္စရာရွိတာမ်ားကိုေသခ်ာစီစဥ္ကာ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ ကယ္တင္ဖို႔ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့..... သူဟာ ဘယ္လိုအဟန္အတားေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ၊ ခင္မင္ခဲ့တဲ့ေကာင္ေလးတို႔သားအမိကိုေရာ ဘယ္လိုေတြမ်ားကယ္တင္ေပးမလဲ၊ ပိုက္ဆံေတြကိုေရာ ျပန္ယူႏိုင္သြားမလားဆိုတာ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါေနာ္။ Review – KKK File Size – 700MB,1.6GB Format…mp4 Quality ...
IMDB: 6.9/10 107,301 votes
Beast (2022) ##unicode မင်းသားကြီး Vijay ရဲ့ Beast ကားလေးအကြည်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Beastဇာတ်ကားမှာတော့ Veeraဟာ RAW အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Beastလို့ နာမည်ပြောင်ခေါ်ခံရအောင်အထိ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာထူးချွန်သူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်‌နေ့မှာတော့ အကြမ်းဖက်သမား Umar Farooqကို ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားရင်း ကလေးတစ်ယောက်ကို မတော်မဆသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် RAWအေးဂျင့်အဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်။ ၁၁လအကြာမှာတော့ မိန်းမချောလေးPerethiအကူအညီနဲ့ လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ရသွားကာ ဈေးဝယ်စင်တာကို သူဌေးနဲ့အတူစာချုပ်ချုပ်ဖို့ လိုက်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာဘဲ Umar Farooqရဲ့ အဖွဲ့က ဈေးဝယ်စင်တာကို အပိုင်စီးကာ ဈေးဝယ်သူတွေကို ဓားစာခံလုပ်ပြီးတော့ သူတို့ခေါင်းဆောင်ကို လွှတ်ပေးဖို့ အစိုးရကို အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ‌ဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာရောက်နေတဲ့ RAWအေးဂျင့်ဟောင်း Veeraတစ်ယောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းပြီး ဓားစာခံတွေကို ကယ်တင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi မင္းသားႀကီး Vijay ရဲ႕ Beast ကားေလးအၾကည္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Beastဇာတ္ကားမွာေတာ့ Veeraဟာ RAW ေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး Beastလို႔ နာမည္ေျပာင္ေခၚခံရေအာင္အထိ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာထူးခြၽန္သူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္‌ေန႔မွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမား Umar Farooqကို ဖမ္းဆီးဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ကေလးတစ္ေယာက္ကို မေတာ္မဆေသဆုံးသြားခဲ့တဲ့အတြက္ RAWေအးဂ်င့္အျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တယ္။ ၁၁လအၾကာမွာေတာ့ မိန္းမေခ်ာေလးPerethiအကူအညီနဲ႔ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ရသြားကာ ေဈး၀ယ္စင္တာကို သူေဌးနဲ႔အတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လိုက္သြားခဲ့တယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာဘဲ Umar ...
IMDB: 7.0/10 15,117 votes
The Lost City (2022) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကားလေးကတော့ "The Lost City" ဆိုတဲ့ Adventure/Action ဇာတ်ကားသစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Brad Pitt , Danial Radcliffe, Sandra Bullock အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ လော်ရက်တာဆေ့ခ်ျဟာစွန့်စားခန်းဝတ္တုတွေရေးတဲ့နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ဝတ္ထုတွေထဲမှာနာမည်အကျော်ဆုံးကတော့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်နဲ့ အနီရောင်စိန်တွေနဲ့စီခြယ်ထားတဲ့သရဖူအကြောင်းပါပဲ တစ်နေ့မှာတော့လော်ရက်တာတစ်ယောက်စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအပြီးအပြန်မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ် သူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့သူကတော့အဘီဂေးဖဲဖက်စ်ဖြစ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်နဲ့ရတနာတွေကိုရှာဖွေချင်နေတဲ့သူပါ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်အကြောင်းကိုသေချာသိထားတဲ့ လော်ရက်တာကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒါနဲ့ပဲလော်ရက်တာတစ်ယောက်သူ့စာအုပ်ထဲကအတိုင်း အပြင်မှာလက်တွေ့စွန့်စားဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်နဲ့ သရဖူဒဏ္ဍာရီကအမှန်ပဲလား ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်သက်သက်ပဲလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ကားေလးကေတာ့ "The Lost City" ဆိုတဲ့ Adventure/Action ဇာတ္ကားသစ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ Brad Pitt , Danial Radcliffe, Sandra Bullock အစရွိတဲ့နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြပါဝင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ ေလာ္ရက္တာေဆ့ခ္်ဟာစြန႔္စားခန္းဝတၱဳေတြေရးတဲ့နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ သူ႔ရဲ႕ဝတၳဳေတြထဲမွာနာမည္အေက်ာ္ဆုံးကေတာ့ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ အနီေရာင္စိန္ေတြနဲ႔စီျခယ္ထားတဲ့သရဖူအေၾကာင္းပါပဲ တစ္ေန႔မွာေတာ့ေလာ္ရက္တာတစ္ေယာက္စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအၿပီးအျပန္မွာ ျပန္ေပးဆြဲခံလိုက္ရပါတယ္ သူ႔ကိုျပန္ေပးဆြဲသြားတဲ့သူကေတာ့အဘီေဂးဖဲဖက္စ္ျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ရတနာေတြကိုရွာေဖြခ်င္ေနတဲ့သူပါ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္းကိုေသခ်ာသိထားတဲ့ ေလာ္ရက္တာကိုျပန္ေပးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ဒါနဲ႔ပဲေလာ္ရက္တာတစ္ေယာက္သူ႔စာအုပ္ထဲကအတိုင္း အျပင္မွာလက္ေတြ႕စြန႔္စားဖို႔ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ သရဖူဒ႑ာရီကအမွန္ပဲလား ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ကူးယဥ္ပုံျပင္သက္သက္ပဲလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.5GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar ...
IMDB: 6.6/10 16,815 votes
The Adventures of Maid Marian (2022) ##unicode The adventures of Maid Marianဇာတ်လမ်းမှာတော့ Robin Hoodတစ်ယောက် ဘုရင်Richardနောက်လိုက်ကာ စစ်သွားတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Marianဟာ sisterအဖြစ်ဘုရားကျောင်းမှာနေခဲ့ရပါတယ်။သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ ဘုရင်Richardသေဆုံးသွားတာကြောင့် Robin Hoodတစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။Marianနဲ့Robinတို့ ပြင်သစ်ကိုသွားကာ လက်ထပ်ပြီး ဘဝကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပေမဲ့ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခံထားရတဲ့De Wendenal တစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာပြီး Robinတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် Robinတစ်ယောက် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရသွားခဲ့တယ်။အကူအညီမဲ့နေတဲ့ Marianတစ်ယောက် ဒဏ်ရာရနေတဲ့Robin Hoodနဲ့အတူ De Wendenalလက်ကဘယ်လိုထွက်ပြေးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The adventures of Maid Marianဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ Robin Hoodတစ္ေယာက္ ဘုရင္Richardေနာက္လိုက္ကာ စစ္သြားတိုက္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Marianဟာ sisterအျဖစ္ဘုရားေက်ာင္းမွာေနခဲ့ရပါတယ္။သုံးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာ ဘုရင္Richardေသဆုံးသြားတာေၾကာင့္ Robin Hoodတစ္ေယာက္ျပန္ေရာက္လာခဲ့တယ္။Marianနဲ႔Robinတို႔ ျပင္သစ္ကိုသြားကာ လက္ထပ္ၿပီး ဘ၀ကိုၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖတ္သန္းဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံထားရတဲ့De Wendenal တစ္ေယာက္ျပန္ေရာက္လာၿပီး Robinတို႔ကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ Robinတစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရသြားခဲ့တယ္။အကူအညီမဲ့ေနတဲ့ Marianတစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရေနတဲ့Robin Hoodနဲ႔အတူ De Wendenalလက္ကဘယ္လိုထြက္ေျပးမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle ...
The Twin (2022) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ thriller horror ဇာတ်ကားဆိုတဲ့အတိုင်း သည်းထိတ်ရင်ဖိုမြင်တွေ့ရမယ့်အပြင် ထူးခြားတဲ့အချက်က သနားစရာဇာတ်အိမ်လေးကို အခြေခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် သားသမီးကို ဆုံးရူံးခဲ့ရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ပူဆွေးသောကက ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ဒုက္ခတွေ အခက်အခဲတွေကို ကြည့်ရူရမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ရေချယ်မှာ အဲလီယက်နဲ့ နေသန်ဆိုတဲ့ သားအမြွာနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့ အက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး နေသန် သေသွားတဲ့အခါမှာတော့ ရေချယ်တို့မိသားစု မိုးပြိုသလို ပူဆွေးသောကရောက်ခဲ့ရပါတယ် နေသန်ကိုပဲ သတိရတဲ့နေတဲ့စိတ်ကြောင့် အိမ်ဟောင်းမှာ မနေတော့ဘဲ ရေချယ်တို့ မိသားစုက သူ့ယောက်ျားရဲ့မွေးရပ်မြေမြို့လေးကို ပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ် နေသန်ကိုဆုံးရူံးပြီးနောက်မှာ ရေချယ်ဟာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေး အဲလီယက်အပေါ်မှာ သိပ်ကိုအစိုးရိမ်လွန်ပြီး အကာကွယ်လွန်လာခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အိမ်ပြောင်းလာပြီးနောက် ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် အဲလီယက်က သူ့ကိုယ်သူ အဲလီယက်မဟုတ်ဘူး နေသန်တဲ့ ဒါ့အပြင် အဲလီယက်က တစ်ယောက်တည်း တစ္ဆေနဲ့ကစားသလိုပုံစံတွေ အဲလီယက်ရဲ့အပြုအမှုတွေ ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာတော့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားက ဘာဖြစ်မလဲ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းအောင် စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္တင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ ဇာတ္ကားကေတာ့ thriller horror ဇာတ္ကားဆိုတဲ့အတိုင္း သည္းထိတ္ရင္ဖိုျမင္ေတြ႕ရမယ့္အျပင္ ထူးျခားတဲ့အခ်က္က သနားစရာဇာတ္အိမ္ေလးကို အေျခခံထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ သားသမီးကို ...
IMDB: N/A/10 29 votes
Saani Kaayidham (2022) ##unicode Saani Kaayidhamဇာတ်ကားမှာတော့ Ponni ဟာရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Dhanaဆိုတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်လဲရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ‌Ponniယောကျာ်းဟာ သူဌေးဖြစ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူဌေးဖြစ်သူရဲ့အဖွဲ့ဟာ Ponniကိုဖမ်းဆီးပြီး အုပ်စုလိုက်အဓမ္မကျင့်ကာ သမီးဖြစ်သူနဲ့ယောကျာ်းကိုလဲ အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီရာဇဝတ်သားတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့ အပြစ်ပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ငွေရှိလူတန်းစားရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ငွေနဲ့လွှတ်မြောက်သွားကြပါတယ်။ အရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့Ponniဟာ Sangayaရဲ့အကူအညီနဲ့ ဒီလူသတ်သမားတွေကိုရှာကာ သူ့သမီးနဲ့ယောကျာ်းကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သလိုမျိုး အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်ဖြတ်ပြီး လက်စားချေဖို့ ကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။Ponniတစ်ယောက် သမီးနဲ့ယောကျာ်းအတွက် လက်စားချေနိုင်ပါ့မလား။ Sangayaနဲ့ Ponniတို့ကရော ဘယ်လိုပတ်သတ်နေတာလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Saani Kaayidhamဇာတ္ကားမွာေတာ့ Ponni ဟာရဲတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ Dhanaဆိုတဲ့သမီးေလးတစ္ေယာက္လဲရွိတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ‌Ponniေယာက်ာ္းဟာ သူေဌးျဖစ္သူနဲ႔ရန္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူေဌးျဖစ္သူရဲ႕အဖြဲ႕ဟာ Ponniကိုဖမ္းဆီးၿပီး အုပ္စုလိုက္အဓမၼက်င့္ကာ သမီးျဖစ္သူနဲ႔ေယာက်ာ္းကိုလဲ အရွင္လတ္လတ္မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ဒီရာဇ၀တ္သားေတြကိုတရားဥပေဒနဲ႔ အျပစ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ ေငြရွိလူတန္းစားရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း ေငြနဲ႔လႊတ္ေျမာက္သြားၾကပါတယ္။ အရာအားလုံးဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့Ponniဟာ Sangayaရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ဒီလူသတ္သမားေတြကိုရွာကာ သူ႔သမီးနဲ႔ေယာက်ာ္းကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး အရွင္လတ္လတ္မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ၿပီး လက္စားေခ်ဖို႔ က်ိန္ဆိုခဲ့တယ္။Ponniတစ္ေယာက္ သမီးနဲ႔ေယာက်ာ္းအတြက္ လက္စားေခ်ႏိုင္ပါ့မလား။ Sangayaနဲ႔ Ponniတို႔ကေရာ ဘယ္လိုပတ္သတ္ေနတာလဲဆိုတာကို ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle ...
IMDB: 7.8/10 958 votes
The Takedown (2022) ##unicode အက်ရှင်ဟာသဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ "The Takedown" ဆိုတဲ့ပြင်သစ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် မှုခင်းကားဆိုပေမယ့်ပျင်းစရာမကောင်းဘဲဇာတ်ဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဟာသအလွဲလေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပေးထားလို့ တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ဖရန်ဆွိုက်နဲ့ ဆူစမန်တို့နှစ်ယောက်ဟာအရင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အလုပ်ဌာနမတူညီတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့သိပ်မတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ရထားကြိတ်မိပြီး ပါလာတဲ့ကိုယ်တစ်ပိုင်းပြတ်အလောင်းတစ်လောင်းကြောင့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ပြီးအတူစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သာဆိုပေမယ့်စိတ်ဓာတ်ရော အတွေးအခေါ်ပိုင်းရောမတူတဲ့သူတို့နှစ်ယောက် ဒီလိုအမှုကြီးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား ပုံပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့အလောင်းကရော သာမန်မတော်တဆမှုပဲလား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi အက္ရွင္ဟာသဇာတ္ကားေလးျဖစ္တဲ့ "The Takedown" ဆိုတဲ့ျပင္သစ္ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ မႈခင္းကားဆိုေပမယ့္ပ်င္းစရာမေကာင္းဘဲဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ဟာသအလြဲေလးေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ေပးထားလို႔ တကယ္ကိုၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ဖရန္ဆြိဳက္နဲ႔ ဆူစမန္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာအရင္တုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အလုပ္ဌာနမတူညီတာေၾကာင့္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့သိပ္မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး ဒါေပမယ့္တစ္ေန႔မွာေတာ့ရထားႀကိတ္မိၿပီး ပါလာတဲ့ကိုယ္တစ္ပိုင္းျပတ္အေလာင္းတစ္ေလာင္းေၾကာင့္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ျပန္ေတြ႕ၿပီးအတူစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္သာဆိုေပမယ့္စိတ္ဓာတ္ေရာ အေတြးအေခၚပိုင္းေရာမတူတဲ့သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဒီလိုအမႈႀကီးကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ့မလား ပုံပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနတဲ့အေလာင္းကေရာ သာမန္မေတာ္တဆမႈပဲလား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow =============================================================================================== GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtotဒေါင်းနည်း (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ဒေါင်းနည်း Gdrive Linkဒေါင်းနည်း
Thar (2022) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ နာမည်ကျော်မင်းသား Harshvardhan Kapoor ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Netflix ကနေ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် တစ်သီးတစ်သန့်ဖြစ်နေတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ဟာ ပြစ်မှုခင်းမရှိ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရာကနေ ရူပ်ထွေးမှုတွေ လူသတ်မှုတွေနဲ့ လှုပ်ခတ်လာခဲ့ပါတယ် အဲဒီ လူသတ်မှုတွေဟာ မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ အမှုက ပိုမိုရူပ်ထွေးလာခဲ့ပြီး အဖြေရှာမရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဒါ့အပြင် သူတို့မြို့ကို ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့လူဆိုပြီးထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် အတိတ်ကို လက်စားချေဖို့ရောက်လာတဲ့ အဲဒီလူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာဖြစ်လာမလဲ လူသတ်မှုတွေကရော သူနဲ့ဆက်စပ်နေမလားဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားပဲဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္မင္းသား Harshvardhan Kapoor ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး Netflix ကေန အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ ဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ တစ္သီးတစ္သန္႔ျဖစ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ဟာ ျပစ္မႈခင္းမရွိ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနရာကေန ႐ူပ္ေထြးမႈေတြ လူသတ္မႈေတြနဲ႔ လႈပ္ခတ္လာခဲ့ပါတယ္ အဲဒီ လူသတ္မႈေတြဟာ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အမႈက ပိုမို႐ူပ္ေထြးလာခဲ့ၿပီး အေျဖရွာမရျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ၿမိဳ႕ကို ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းဝယ္တဲ့လူဆိုၿပီးထူးဆန္းတဲ့လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ အတိတ္ကို လက္စားေခ်ဖို႔ေရာက္လာတဲ့ အဲဒီလူရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘာျဖစ္လာမလဲ လူသတ္မႈေတြကေရာ သူနဲ႔ဆက္စပ္ေနမလားဆိုတာစိတ္လႈပ္ရွားမႈအျပည့္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ဇာတ္ကားပဲျဖစ္လို႔ အားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – ...
IMDB: 6.4/10 14756 votes
Jhund (2022) ##unicode နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး အမီတာဘချမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက် ရုံတင်ဇာတ်ကားကို အားပေးလို့ရပါပြီနော် ဒီဇာတ်ကားက ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်က ကလေးတွေကို ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်လာအောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့အားကစားဆရာတစ်ယောက်အကြောင်း အခြေခံထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပြီးအဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ အားကစားဆရာဇာတ်ကောင်မှာ အမီတာဘချမ်းက ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အရက်သောက် ၊ ဖဲရိုက်၊ ဆေးချလုပ်နေတဲ့ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ကကလေးတွေကို အားကစားဆရာတစ်ယောက်က မင်းတို့ ဘောလုံးကန်ရင် ရူပီးငါးရာပေးမယ်ဆိုပြီး ဘောလုံးကန်ဖို့သူတို့ကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ ပိုက်ဆံရရင် ဘာမဆိုလုပ်ချင်တဲ့ ဒီကောင်တွေကလည်း ကန်ကြတယ် ဒီလိုနဲ့ တစ်ဖြေးဖြေး ဆရာက ရူပီးငါးရာလာမပေးရင်တောင် သူတို့ဟာသူတို့ စည်သွပ်ဘူးလေးတွေနဲ့ ရအောင်ကန်ရာကနေ ဘောလုံးကို ရူးသွပ်လာကြပါတယ် နောက်ဆုံး ကောလိပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အထိ သူတို့ဆရာက ပွဲစီစဉ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တွေရဲ့ ဘောလုံးအရည်အချင်းတွေ ဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာမလဲ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်က ကလေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာနဲ့ သူတို့ကြားက မေတ္တာသံယောဇဉ်တွေကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာ အားပေးရမှာပဲဖြစ်လို့ ခံစားကြည့်ရူကြပါဦးနော် ##zawgyi နာမည္ေက်ာ္မင္းသားႀကီး အမီတာဘခ်မ္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအသစ္ထြက္ ႐ုံတင္ဇာတ္ကားကို အားေပးလို႔ရပါၿပီေနာ္ ဒီဇာတ္ကားက ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္က ကေလးေတြကို ေဘာလုံးသမားေတြျဖစ္လာေအာင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့တဲ့အားကစားဆရာတစ္ေယာက္အေၾကာင္း အေျခခံထားတဲ့ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားပဲျဖစ္ၿပီးအဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ အားကစားဆရာဇာတ္ေကာင္မွာ အမီတာဘခ်မ္းက ပါဝင္အားျဖည့္ထားပါတယ္ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အရက္ေသာက္ ၊ ဖဲ႐ိုက္၊ ေဆးခ်လုပ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ကကေလးေတြကို အားကစားဆရာတစ္ေယာက္က မင္းတို႔ ...
IMDB: 8.6/10 20,673 votes
RRR (2022) ##unicode အက်ရှင်ဒရမ်မာဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်ကြီးလက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ "RRR" ဆိုတဲ့အသစ်ထွက်အိန္ဒိယကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲနာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ NT Rama Rao Jr, Ram Charan, Ajay Devgn တို့နဲ့အတူ မကြာသေးခင်ကမှ ဂန်ဂူဘိုင်ကားနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းသမီး Alia Bhatt လည်းပါဝင်ထားလို့လုံးဝကို လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါ့မယ် ၁၉၂၀ခုနှစ်အိန္ဒိယကိုဗြိတိသျှတွေအုပ်စိုးတဲ့အချိန်တုန်းကဘုရင်ခံစကေ့ာနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာတောထဲကို အမဲလိုက်ထွက်ရင်းနဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်သီချင်းဆိုတာကိုသဘောကျပြီးသူ့မိဘတွေဆီကနေ အတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ် အဲ့ဒီမှာဘင်းတစ်ယောက်သူတို့မျိုးနွယ်စုကကလေးမလေးကိုွပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ဒေလီကိုတက်လာခဲ့ပါတယ် တစ်ဖက်မှာလည်းဗြိတိသျှတွေဟာသူတို့ကို ချေမှုန်းဖို့အတွက် ဒေလီကိုလူတစ်ယောက်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါ ပိုက်စိပ်တိုက်ရှာဖွေပါတော့တယ် ဒီနေရာမှာဘင်းကိုလိုက်ရှာဖို့အတွက်တာဝန်ပေးခံရတဲ့သူကတော့အိန္ဒိယလူမျိုးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာဂျူးပဲဖြစ်ပါတယ် ရာဂျူးနဲ့ဘင်းတို့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာဘယ်သူကအနိုင်ရပြီးဘယ်သူကအရှုံးပေးရမလဲ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့ဗြိတိသျှတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားပြီးတိုက်ထုတ်သွားမလဲဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi အက္ရွင္ဒရမ္မာဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြကိုသေဘာက်တဲ့ပရိသတ္ႀကီးလက္မလႊတ္တမ္းၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ "RRR" ဆိုတဲ့အသစ္ထြက္အိႏၵိယကားေကာင္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ တကယ့္ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲနာမည္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ NT Rama Rao Jr, Ram Charan, Ajay Devgn တို႔နဲ႔အတူ မၾကာေသးခင္ကမွ ဂန္ဂူဘိုင္ကားနဲ႔နာမည္ႀကီးေနတဲ့မင္းသမီး Alia Bhatt လည္းပါဝင္ထားလို႔လုံးဝကို လက္လႊတ္မခံသင့္တဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကိုနည္းနည္းေျပာျပပါ့မယ္ ၁၉၂၀ခုႏွစ္အိႏၵိယကိုၿဗိတိသွ်ေတြအုပ္စိုးတဲ့အခ်ိန္တုန္းကဘုရင္ခံစေက့ာနဲ႔သူ႔ရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူဟာေတာထဲကို အမဲလိုက္ထြက္ရင္းနဲ႔ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္သီခ်င္းဆိုတာကိုသေဘာက်ၿပီးသူ႔မိဘေတြဆီကေန အတင္းအက်ပ္ေခၚေဆာင္သြားပါတယ္ အဲ့ဒီမွာဘင္းတစ္ေယာက္သူတို႔မ်ိဳးႏြယ္စုကကေလးမေလးကို ြြ ျပန္ေခၚဖို႔အတြက္ေဒလီကိုတက္လာခဲ့ပါတယ္ တစ္ဖက္မွာလည္းၿဗိတိသွ်ေတြဟာသူတို႔ကို ေခ်မႈန္းဖို႔အတြက္ ေဒလီကိုလူတစ္ေယာက္တက္လာတယ္ဆိုတဲ့သတင္းၾကားတဲ့အခါ ပိုက္စိပ္တိုက္ရွာေဖြပါေတာ့တယ္ ဒီေနရာမွာဘင္းကိုလိုက္ရွာဖို႔အတြက္တာဝန္ေပးခံရတဲ့သူကေတာ့အိႏၵိယလူမ်ိဳးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ရာဂ်ဴးပဲျဖစ္ပါတယ္ ရာဂ်ဴးနဲ႔ဘင္းတို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲမွာဘယ္သူကအႏိုင္ရၿပီးဘယ္သူကအရႈံးေပးရမလဲ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြကိုဖိႏွိပ္ေနတဲ့ၿဗိတိသွ်ေတြကိုဘယ္လိုမ်ိဳးႀကိဳးစားၿပီးတိုက္ထုတ္သြားမလဲဆိုတာေတြကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.4GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard ...
IMDB: 8.4/10 61,190 votes
Black Site (2022) ##unicode Black Siteဇာတ်ကားမှာတော့ Abbyဟာ Crime Analyst တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူမရဲ့ယောကျာ်းနဲ့သမီးဖြစ်သူကတော့ Istanbul ကဆေးရုံ‌ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဗုံးခွဲသူလို့ သံသယရှိသူHatchetကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက် သဲကန္တာရထဲက Citadelလို့ခေါ်တဲ့အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကို Abbyတစ်ယောက်ပြောင်းရွေ့လာခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ Abbyဖမ်းဆီးချင်နေတဲ့ Hatchetကို ဖမ်းဆီးမိပြီးတော့ စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့အတွက် Citadelကိုခေါ်လာကြောင်း Abbyတစ်ယောက် သတင်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။Abbyတစ်ယောက် Hatchetကိုစစ်မေးနိုင်ပြီလို့ ထင်ခဲ့ပေမဲ့ Hatchetဟာ ဖမ်းဆီးထားရာကနေ လွတ်မြောက်သွားပြီ Citadelအခြေစိုက်စခန်းက လူတွေအကုန် လိုက်လံသတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။ Abbyတစ်ယောက် လူသတ်သမားHatchetလက်ကနေ အသက်ရှင်လျက်ထွက်ပြေးနိုင်မလား။ သူမယောကျာ်းနဲ့သမီးလေးသေဆုံးမှုရဲ့ အမှန်တရားကိုရော ဖော်ထုတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Black Siteဇာတ္ကားမွာေတာ့ Abbyဟာ Crime Analyst တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူမရဲ႕ေယာက်ာ္းနဲ႔သမီးျဖစ္သူကေတာ့ Istanbul ကေဆး႐ုံ‌ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္မွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ဗုံးခြဲသူလို႔ သံသယရွိသူHatchetကိုဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သဲကႏၲာရထဲက Citadelလို႔ေခၚတဲ့အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုကို Abbyတစ္ေယာက္ေျပာင္းေ႐ြ႕လာခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ Abbyဖမ္းဆီးခ်င္ေနတဲ့ Hatchetကို ဖမ္းဆီးမိၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေမးျမန္းဖို႔အတြက္ Citadelကိုေခၚလာေၾကာင္း Abbyတစ္ေယာက္ သတင္းလက္ခံရရွိခဲ့တယ္။Abbyတစ္ေယာက္ Hatchetကိုစစ္ေမးႏိုင္ၿပီလို႔ ထင္ခဲ့ေပမဲ့ Hatchetဟာ ဖမ္းဆီးထားရာကေန လြတ္ေျမာက္သြားၿပီ Citadelအေျခစိုက္စခန္းက လူေတြအကုန္ လိုက္လံသတ္ျဖတ္ပါေတာ့တယ္။ Abbyတစ္ေယာက္ လူသတ္သမားHatchetလက္ကေန အသက္ရွင္လ်က္ထြက္ေျပးႏိုင္မလား။ သူမေယာက်ာ္းနဲ႔သမီးေလးေသဆုံးမႈရဲ႕ အမွန္တရားကိုေရာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – ...
Sonic the Hedgehog2(2022) ##unicode ၂၀၂၀ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Sonic The Hedgehog ရဲ့အဆက်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ "Sonic The Hedgehog 2"ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပထမကားလေးတုန်းကလည်း လူကြိုက်များခဲ့သလိုပဲ ဒီတစ်ခေါက်ထွက်ရှိလာတဲ့ဒုတိယကားလေးကလည်း အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကို နည်းနည်းပြောပြပါမယ် ဗီလိန်ကြီးဒေါက်တာရိုဘော့နစ်ကိုကမ္ဘာဂြိုဟ်နဲ့ဝေးရာမှာပိတ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆိုးနစ်တစ်ယောက် Green Hills မှာပဲအခြေချနေထိုင်နေပါတယ် ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ပြီးဟီးရိုးဖြစ်ချင်စိတ်ကတော့ ‌ပျောက်မသွားပါဘူး ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာတော့သူပိတ်ထားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာရိုဘော့နစ်ဟာ နက်ကယ်ဆိုတဲ့ပါတနာအသစ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး လူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့စွမ်းအားကြီးကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကိုရှာဖို့အတွက်ကြံစည်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆိုးနစ်ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေစတင်လာပါတော့တယ် ဆိုးနစ်တစ်ယောက်ကျောက်စိမ်းတုံးကိုမကောင်းတဲ့သူတွေရန်ကနေဘယ်လိုကာကွယ်သွားမလဲ ဘယ်လိုစွန့်စားခန်းတွေဖွင့်မလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ၂၀၂၀ တုန္းကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Sonic The Hedgehog ရဲ႕အဆက္အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ "Sonic The Hedgehog 2"ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ပထမကားေလးတုန္းကလည္း လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သလိုပဲ ဒီတစ္ေခါက္ထြက္ရွိလာတဲ့ဒုတိယကားေလးကလည္း အေတာ္ေလးစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းၿပီး ၾကည့္လို႔ေကာင္းပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကို နည္းနည္းေျပာျပပါမယ္ ဗီလိန္ႀကီးေဒါက္တာ႐ိုေဘာ့နစ္ကိုကမာၻၿဂိဳဟ္နဲ႔ေဝးရာမွာပိတ္ထားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆိုးနစ္တစ္ေယာက္ Green Hills မွာပဲအေျခခ်ေနထိုင္ေနပါတယ္ ဒါေပမယ့္သူ႔ရဲ႕လူေတြကိုကယ္တင္ၿပီးဟီး႐ိုးျဖစ္ခ်င္စိတ္ကေတာ့ ‌ေပ်ာက္မသြားပါဘူး ဒီလိုနဲ႔တစ္ေန႔မွာေတာ့သူပိတ္ထားခဲ့တဲ့ေဒါက္တာ႐ိုေဘာ့နစ္ဟာ နက္ကယ္ဆိုတဲ့ပါတနာအသစ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး လူသားေတြအတြက္အႏၲရာယ္ရွိတဲ့စြမ္းအားႀကီးေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကိုရွာဖို႔အတြက္ႀကံစည္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ဆိုးနစ္ရဲ႕ စြန႔္စားခန္းေတြစတင္လာပါေတာ့တယ္ ဆိုးနစ္တစ္ေယာက္ေက်ာက္စိမ္းတုံးကိုမေကာင္းတဲ့သူေတြရန္ကေနဘယ္လိုကာကြယ္သြားမလဲ ဘယ္လိုစြန႔္စားခန္းေတြဖြင့္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
IMDB: 7.0/10 12,744 votes